Iqhwa lase-Arctic liyancibilika ebusika futhi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iqhwa lase-Arctic liyancibilika ebusika futhi
Noma ingahle ibe nelukuluku, Iqhwa lase-Arctic liyaqhubeka ukuncibilika ebusika, njengoba kuvezwe yimininingwane yakamuva kaJanuwari evela kwiNational Snow and Ice Center (NSIC). Ngaleyo nyanga yaphela ngamakhilomitha ayisigidi ayizigidi eziyi-13,06 eqhwa, u-1,36 wezigidi km2 ngaphansi kunesikhathi sokubhekisela kusuka ku-1981 kuya ku-2010.
Amazinga okushisa kule ngxenye yomhlaba ayashisa kakhulu ukuba kungabamba iqhwa, ngakho-ke i-Arctic kulindeleke ukuthi ishiywe ngaphandle kwesembozo sayo seqhwa ngokuzayo.
Ulwandle lwe-arctic kurekhode ukushisa okungenani okungu-3 degrees Celsius ngaphezu kwesilinganiso. Ezilwandle zaseKara naseBarents lokhu kwenyuka bekufike ku-9ºC. Ngasohlangothini lwePacific, i-thermometer ifunde cishe u-5ºC ngaphezu kwesilinganiso; ngakolunye uhlangothi, eSiberia izinga lokushisa lalifinyelela ku-4ºC ngaphansi kunokujwayelekile.
Lolu shintsho belungumphumela wendlela yokujikeleza komkhathi ehambisa umoya osuka eningizimu, efudumele, kanye nokukhiphela ukushisa emkhathini kusuka ezindaweni zamanzi avulekile. Ngaphezu kwalokho, umfutho wamanzi olwandle wawuphakeme kakhulu kunokujwayelekile e-Arctic emaphakathi, ukuze kudluliswe umoya oshisayo ovela e-Eurasia kuleso sifunda sase-Arctic.
Isithombe - NSIDC.org
Uma kungekho okuguqukayo izinga lokushisa elijwayelekile kulindeleke ukuthi lenyuke ngama-4 noma ama-5 degrees maphakathi nekhulu leminyaka, ebizomela kabili okulindeleke ukuthi kwandiswe enyakatho Nenkabazwe yonkana. Ngokuqondene neqhwa, lingacishe linyamalale ngokuphelele, kushiye amakhilomitha-skwele angaphansi kwesigidi ehlobo njalo ehlobo kusukela ngawo-1s, okuzokwenza ukuthi ngeshwa kusho ukuphela kwamabhere asezindaweni eziphakeme.
Ngeminye imininingwane, sincoma ukwenziwa chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Iqhwa lase-Arctic liyancibilika ebusika futhi
Isendlalelo se-ozone sehluleka ukuqinisa ezindaweni ezinabantu abaningi kakhulu emhlabeni
ISpain ngaphansi kweqhwa: amazinga okushisa aze afike ku -8ºC ashiya imigwaqo engama-60 inqanyuliwe